एमसीसी स्वीकार्दैमा नेपालमा लागू हुँदैनः मन्त्री झाँक्री – Nepal Views
एमसीसी स्वीकार्दैमा नेपालमा लागू हुँदैनः मन्त्री झाँक्री
अरू धेरै देशले सो सम्झौता स्विकार गरेको स्मरण गराउँदै ती देशहरूले कुरा नबुझेको हो त ? भनी एमसीसीका आचोजकहरूलाई प्रश्नसमेत उनले प्रश्न गरिन्।
काठमाडौं। शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी स्विकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकरण नेपालमा लागू नहुने बताएकी छन्। अरू धेरै देशले सो सम्झौता स्विकार गरेको स्मरण गराउँदै ती देशहरूले कुरा नबुझेको हो त ? भनी एमसीसीका आचोजकहरूलाई प्रश्नसमेत उनले प्रश्न गरिन्।
सरकारले स्विकार गरेर ल्याएको एमसीसी अनुदान सहायता भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्न नहुने तर्कसमेत दोहोर्‍याइन्। मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, “एमसीसी सरकारले स्विकार गरेर ल्याएको अनुदान हो, सहायता हो। यसलाई संसदमा डिबेट गरेर पास गरियो। अब हामीले गफ गरेजस्तै एमसीसी स्विकार गर्दैमा अमेरिकन प्राधिकार यहाँ लागू हुने हो त ? त्यो हो भने त हामीभन्दा अर्को आधा दुनियाँ त हुन्छ भन्ने छ नि त। उनीहरूले के कुरा नबझुको हो ? हामी मात्रै सोभरेन्टीको लागि यति साह्रो चिन्तित भएको हो त ? त्यसो त नहोला।”
२४ फागुन २०७८ १७:०२